Tunç Soyer Ayaa Abaalmarin siiyay Kuxirmayaasha Izmir | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirTunç Soyer ayaa Abaalmarin siiyay Kuxiyaasha Bareegayaasha Izmir
19 / 02 / 2020 35 Izmir, Turkish Aegean, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
tunc soyer wuxuu kahelay rookayaasha izmir
Xafladda abaalmarinta Tartanka Baaskiil Bulsheedka oo lagu qabtay Izmir isla mar ahaantaana 29 magaalo oo Yurub ah oo qayb ka ah Toddobaadka Dhaqdhaqaaqa Yurub ayaa maanta la qabtay.
Xafladda abaalmarinta Tartanka Baaskiil Bulsheedka oo ay soo qabanqaabisay Xarunta Cilmi-baarista Wadajirka ee Guddiga Yurub ee ku saabsan baaxadda Isbuuca Dhaq-dhaqaaqa Yurub (EuropeanMobilityWeek) ayaa lagu qabtay maanta magaalada Izmir Metropolitan Municipal. Duqa Magaalada Magaalada Izmir ee Magaalo Weyn Tunç Soyer ayaa abaalmarino gudoonsiiyay baaskiilleyda ka socda Izmir, oo kaalinta koowaad ka galay tartanka.
Tartankan, oo ay sidoo kale taageertay Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir, waxaa isla mar ahaan loo qabtay 29 magaalo oo Yurub ah laga bilaabo Sebtember 16-keedii ilaa Oktoobar 6. 297 isticmaaleyaasha baaskiilka ayaa ka qeyb galay tartankan, kaas oo looga golleeyahay in lagu sameeyo baaskiil wadida waxqabad bulsheed. Loogu abaabulay saddex qaybood sida kalidii, lammaane iyo kooxo, tartamayaashu waxay duubiyeen masaafadooda iyagoo uga mahadcelinaya barnaamijka BikePrints ee ay ka soo dejiyeen taleefannadooda gacanta.
Ujeedada ayaa ah in kor loogu qaado baaskiil ahaan hab gaadiid
Munaasabadda ayuu Tunç Soyer sheegay inay rabaan inay kor u qaadaan baaskiil si ay gaadiid ugu qaadaan magaalada İzmir. Isaga oo ka hadlaya laba hadaf oo la xiriira gaadiidka si kor loogu qaado tayada nolosha ee İzmir, Soyer wuxuu hadalkiisa sii watay: “Ujeeddooyinka ugu horreeya waa in la dhiirrigeliyo caafimaad qab, la isku halleyn karo, la gaari karo, gaadiidka dadweynaha ee jaban iyo isticmaalka baaskiilka. Ta labaad waa in si firfircoon loogu ballaariyo nidaamka taraafikada ee caqliga leh Izmir oo dhan. Qaabkayaga ugu weyni waa inaan ballaarinno bey'ada ku habboon deegaanka, badbaadada iyo ikhtiyaarrada gaadiidka kale ee caafimaad sida gaadiidka dadweynaha iyo baaskiiladaha iyadoo la yareynayo adeegsiga gawaarida shaqsiyadeed ee magaalooyinka maalinba maalinta ka sii dambeysa.
Duqa Magaalada Caasimada Izmir ee Magaalada Tunç Soyer ayaa noqday qofkii ugu horreeyay ee adeegsada baaskiillada hadiyadda. Soyer wuxuu kaalinta koowaad ee hal-doorka u soo bandhigay İlhami Emre Karacivan, guuleystayaasha lammaanaha, Mustafa Kemal Kara iyo Züleyha Dikbaş, iyo kuwii ku guuleystey qeybta guruubyada Kıvanç Dükkancı, Yiğit Yılmaz, Canan Ocak iyo Berdan Arslan. Boorso baaskiil ayaa lasiiyay 30 kaqeybgale oo ay go'aamisay sawirka Xarunta Cilmibaarista Wadajirka ee Yurub.
Ogeysiinta Ugaarsiga: Tavşanlı - Wadada Tunçbilek waxay ku taalaa goobta tareenka ee Tunçbilek oo leh waddo L = 2.319 mitir.
Siemens InnoTrans waxay qabteen xaflad gaar ah oo loogu talagalay booqdayaasha 2012
Tunç Soyer wuxuu fuliyay sahankiisii ​​ugu horreeyay ee goobtiis tareennada Sublıdere
Madaxweyne Brouss Soyer Maxay 100 Ka Qabatay?
Tunç Soyer Waxaa lagu sharfayaa İZBETON iyo İZELMAN Shaqaalaha
Baaskiil-wadeyaasha ka socda Izmir
Toddobaadka Dhaqdhaqaaqa Yurub
Tartanka Baaskiil Bulsho
Xafladda abaalmarinta Tartanka Baaskiilka Bulshada